पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा विकास बैंकले काम गर्न सक्दैनन्ः रेशमबहादुर थापाको अन्तर्वार्ता  Clickmandu
पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा विकास बैंकले काम गर्न सक्दैनन्ः रेशमबहादुर थापाको अन्तर्वार्ता
रेशम बहादुर थापा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गण्डकी विकास बैंक २०७५ वैशाख ३१ गते १५:३४ मा प्रकाशित
झण्डै २ बर्ष अगाडि फेवा फाइनान्स र विश्व विकास बैंक मर्ज भएर बनेको फेवा विकास बैंकसँग करिब १ बर्ष अगाडि गण्डकी विकास बैंक मर्ज भएर गण्डकी विकास बैंक बनेको थियो । गण्डकी र फेवा दुबै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक थिए ।
अहिले गण्डकी विकास बैंकले ब्यवसाय विस्तारसँगै शाखा संजाल विस्तारलाई पनि तीब्र पारेको छ । वित्तीय सुचक राम्रा भएका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमध्येमा पर्ने गण्डकी विकास बैंकले आफ्नो ब्यवसाय विस्तारका साथै शाखा संजाल विस्तारलाई अझ ब्यापक बनाउन लागेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापा बताउँछन् । विकास बैंकहरुको संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका सचिब समेत रहेका थापा राष्ट्र बैंकले आगामी असोजदेखि अनिवार्य लागू गर्न दिएको ५ प्रतिशतको स्प्रेडमा विकास बैंकहरुले काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । थापासँग अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको अबस्था, विकास बैंकहरुको सम्भावना र गण्डकी विकास बैंकको अबको रणनीति लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीः
तपाइ राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक, र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको सचिब पनि हुनुहुन्छ, अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अबस्था बारे कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सकारात्मक छ । सकारात्मक हुदाँहुदै पनि विगत बर्षहरुको भन्दा यो बर्षको तेस्रो त्रैमासमा आउदा केही उतारचढाब जस्तो देखिएको छ । जस्तो कि सहज रुपमा निक्षेप बृद्धि नहुने र हामीले सहज रुपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । निक्षेप नै कम भएपछि कर्जा लगानीदेखि लगानीका अन्य कामहरु अपेक्षित रुपमा गर्न सकिएको छैन । यस्तो संकुचनले हाम्रो कष्ट अफ फण्ड बढेको छ । हाम्रो कष्ट अफ फण्ड बढेपछि पहिला लगानी गरिएको र थप लगानी गर्ने कर्जाको ब्याजदर केही महंगो भएको छ ।
समग्रतामा भन्दा यो बर्ष अपेक्षित रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । बैंकका सुचकको मात्रै कुरा गर्दा राम्रो छ । तर एउटा इन्टरप्रिनरले सहज रुपमा काम गर्ने अबस्था भने छैन । किनभने आवश्यक मात्रामा पनि हामीले कर्जा प्रवाह गर्न सकेनौं । र, अर्काे कुरा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीबाट प्रतिफल पनि हेर्ने गर्छ । कर्जाको ब्याजदर महंगो भएकोले यो ब्याजदरमा लगानी गर्दा मेरो प्रतिफल सुरक्षित हुन्छ कि हुदैन भनेर लगानीकर्ताले सोच्नुपर्ने अबस्था आएको छ । त्यसकारण कर्जामा इन्क्रिजिङ रेट अफ रिटर्न छ, तर जुन प्रकारको बृद्धि हुनुपथ्र्यो त्यो भने भएको छैन ।
अहिले बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुको कारण कर्जा निक्षेप पुँजी अनुपात (सीसीडी रेसियो) को कारणले हो, कर्जाको बृद्धि अनुपातमा निक्षेप बृद्धि नहुदा यस्तो समस्या आएको हो भने यसमा बैंकहरुले पनि राम्रो योजना बनाउन नसकेको भन्न मिल्छ ?
तपाइले भनेको कुरा केही हदसम्म ठीक हो । कतिपय हामी बैंकर साथीहरुले बनाएको आफ्नो बैंकको योजना सस्टेनेबल ग्रोथको लागि हो कि होइन भन्ने कुरा आएको छ । देशको आर्थिक अवस्था र आर्थिक क्रियाकलाप अनुसारको योजना हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्ने ठाँउ छ । हामीमध्ये केहीले बर्षभरीको लागि बनाइएको बजेट योजना पहिलो ६ महिनामै सिध्यायौं । केही बैंकहरुले त पहिलो त्रैयमासमै १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गरिदिए । यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सीसीडी रेसियोको चाप पर्यो । त्यस्तो चाप ब्याजदरमा पर्यो । र, बजारमा नयाँ नयाँ ब्याजदर आउन थाल्यो । आज एउटा ब्याजदर आउने र भोलि नै अर्काे ब्याजदर आउने पनि हुन थाल्यो । तर, यसले पनि निक्षेप बढाएन । रेमिटान्सको बृद्धिदर घट्दो रुपमा छ । कतिपय फण्डहरु बैंकिङ प्रणालीमा नआएको हो कि भन्ने जनमानसमा परेको छ ।
ब्यवसायमा लगाइएको सीमालाई मध्यनजर गर्दै विकास बैंकहरुको हकमा कम्तिमा पनि ६ प्रतिशत स्प्रेड राख्न पाउने ब्यवस्था गरिदिनुस् भनेर हामीले राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेका छौं । नत्र हामी बाच्न सक्दैनौं भनेका छौं । हामीलाई ननफण्डबेस्ड एक्टिभिटिजमा सीमा लगाइएको छ ।
सरकारको पुँजीगत खर्च भनिए अनुसार खर्च भएको छैन । यस्ता कुराहरुले निक्षेप बृद्धि प्रभावित भएको छ । यी सबै परिदृश्यका बावजुत बैंकहरुले राम्रो योजना बनाउनु पर्ने हो । तर, केही ठूला बैंकहरुले यस्तो प्रभावकारी योजना नबनाउँदा ठूला साना सबै प्रकारका बैंकहरु त्यही घानमा परे । अहिले निक्षेपकर्ताले राम्रो ब्याज पाउनु भएको छ । तर, कर्जा लिनेलाई समस्या भएको छ । निक्षेपकर्ता र कर्जा लिने दुबै पक्षले उत्तिकै फाइदा पाउनु पर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । निक्षेप र कर्जाको विस्तार सँगै हुनुपर्नेमा त्यसो नभएर कर्जा लिन चाहनेहरुलाई समस्या भएको छ ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ १७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ, नोमिनल जीडीपी ग्रोथ १३/१४ प्रतिशत छ, यस्तो अबस्थामा बैंकहरुले विजनेस नपाएको भन्न सकिन्छ र ?
अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढेको छ । तर त्यो नाफा भोल्यूममा भएको छ । नाफा बृद्धिको पनि अर्काे कारण छ । यो बीचमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गए र केहीले अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अक्वायर गरे । केही बैंक वित्तीय संस्थाहरुले हकप्रद सेयर जारी गरे । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एफपीओ पनि जारी गरे । मर्जर र एक्विजिसनमा स्वाप रेसियोको कारण केही रकम आयो, त्यो रकम नाफामा देखाउन पाइयो । हकप्रद जारी गर्दा ठूलो लगानी नगरी रकम प्राप्त भयो । एफपीओबाट आएको अतिरिक्त रकमले त झन् नाफा बढाउन सहयोग गर्यो नै । निक्षेप लिनु परेको भए त्यसको खर्च लाग्थ्यो ।
जनतालाई वित्तीय र बैंकिङ सेवा विकास बैंकहरुले प्रदान गरेका छन् । विकास बैंकहरुले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । दुई बर्ष अगाडि बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी जति थियो अहिले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुसँग त्योभन्दा पनि बढी चुक्ता पुँजी छ ।
तर, यसरी प्राप्त भएको पैसामा खासै खर्च लागेन । यसको अर्काे पाटो के हो भने अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इपीएस घटेको छ । त्यसकारण अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बृद्धि घट्दो दरको हो । यो बृद्धिलाई राम्रो भनेर भन्न हुदैन । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राइटब्याकबाट पनि नाफा बढाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पछिल्लो समय शाखा विस्तारमा बढी जोड दिएका छन् । नयाँ शाखाहरुले नाफा कमाउन वा ब्रेकइभनमा आउँन समय लाग्छ । अर्थात खर्च बढी छ । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिले सहज अवस्थामा भए पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अबस्थामा भने छन् ।
नाफा बृद्धिदर घट्दो क्रममा छ भन्नुभयो, तर नाफा बढेकै छ, तपाइहरुले स्प्रेडदर बढी राखेर कर्जा लिने ब्यक्तिहरुमाथि अन्याय गरेको होइन र ?
बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पछिल्लो समय भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो आरोप नै यही हो । बजारमा बस्तु तथा सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिले गर्ने हो । आजभन्दा एक बर्ष अगाडि ७/८ प्रतिशत ब्याज थियो मुद्दति निक्षेपमा । अहिले ११/१२ प्रतिशत त बाणिज्य बैंकहरुको नै पुगेको छ । विगतमा हामी जस्ता विकास बैंकहरुले नै ९/१० प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गरेका थियौं । आजको अबस्था फरक छ । हामी वित्तीय मध्यस्थता गर्ने निकाय मात्रै हौं । हामीले प्राप्त गर्ने निक्षेपमा संचालन खर्च र लगानीकर्ताको केही नाफा राखेर कर्जा दिने हो । हाम्रै गण्डकी विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने गत बर्षको भन्दा यो बर्ष ०.३ प्रतिशतले स्प्रेड दर घटेको छ । तर, हामी आफै यो ब्याजदर बढी भयो, यति ब्याजदरमा लगानी गरेर हाम्रा उद्योगी ब्यवसायी बाँच्न सक्दैनन् भनेर हामी आफै भनिरहेका छौं ।
आगामी असोजदेखि ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दर ५ प्रतिशत अनिवार्य गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ, त्यो दर कायम राख्न विकास बैंकहरुलाई कत्तिको सहज छ ?
म डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको सचिब पनि हूँ । संघले आफ्ना कुरा राष्ट्र बैंकसँग राखिसकेको पनि छ । हामीलाई बाणिज्य बैंक सरह स्प्रेड कायम गर्नु न्यायोचित हुदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । किनभने बाणिज्य बैंकहरुलाई काम गर्ने दायरा हाम्रोभन्दा बढी छ । लोकल एलसी, अन्य प्रकारका एलसी वा बैंक ग्यारेन्टीको काम विकास बैंकहरुलाई गर्न दिइएको छैन । स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउने भनियो । तर विकास बैंकहरुमा शाखा खोल्न पाइने ब्यवस्था छैन । ब्यवसायमा लगाइएको सीमालाई मध्यनजर गर्दै विकास बैंकहरुको हकमा कम्तिमा पनि ६ प्रतिशत स्प्रेड राख्न पाउने ब्यवस्था गरिदिनुस् भनेर हामीले राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेका छौं । नत्र हामी बाच्न सक्दैनौं भनेका छौं । हामीलाई ननफण्डबेस्ड एक्टिभिटिजमा सीमा लगाइएको छ भनेका छौं । नयाँ सरकार स्थीर सरकार आएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूलाई बैंकिङ क्षेत्रको बारे सबै जानकारी छ । यसकारण हाम्रो माग सम्बोधन होला भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
अहिले विकास बैंकहरुको मात्रै अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
अहिले विकास बैंकहरुको अबस्था राम्रो छ । यो तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा राम्रा भनिएका केही बाणिज्य बैंकहरुलाई गाह्रो भयो होला, तर हामीलाई कुनै समस्या परेको छैन । केही बाणिज्य बैंकहरुले नेपालको बैंकिङ इतिहासमै पहिलो पटक १३ प्रतिशतसम्म ब्याजमा निक्षेप लिए । तर विकास बैंकहरु सहज अबस्थामा रहे । ग्रोथको कुरा गर्ने हो भने केही विकास बैंकले राम्रो गरे होलान् । केहीको मध्यम भयो होला र केही स्थीर बसे होलान् । तर समस्यामा परेका छैनन् ।
पुँजी बृद्धिको राष्ट्र बैंकको नीति र ब्यवसायमा आएको प्रतिस्पर्धाका कारण विकास बैंकहरुको भविष्यमाथि नै प्रश्न गर्ने गरिएको छ, तपाइलाई यसमा के लाग्छ ?
मर्जर र एक्विजिसनको कारण १, ३ र १० जिल्ले केही विकास बैंक ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गए भने केही आफै मिलेर राष्ट्रियस्तरको बने । अहिले नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (एफएसडीएस) मा युनिभर्सल बैंकिङको कुरा छ । पुँजीका आधारमा बैंकको कार्य विभाजन गर्ने र नेपालमा स्पेसलाइज्ड बैंक बनाउने अबधारणा त्यसमा छ । सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने मानसिकताले राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसन नीति ल्याएको देखिन्छ । तर, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपनि बाणिज्य बैंकहरुको संख्या खासै घटेन । यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले पनि गहिरिएर हेरेको अबस्था छ ।
खोलो हिडेको ठाँउमा चिसो हुन्छ भन्छन्, हाम्रो मर्जरमा त्यस्तो चिसो पनि देखिएन । सबै कुरा सकारात्मक मात्रै देखिए ।
विकास बैंककै कुरा गर्ने हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म हरेकको मानसपटलमा विकास बैंक बसेको छ । जनतालाई वित्तीय र बैंकिङ सेवा विकास बैंकहरुले प्रदान गरेका छन् । विकास बैंकहरुले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । दुई बर्ष अगाडि बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी जति थियो अहिले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुसँग त्योभन्दा पनि बढी चुक्ता पुँजी छ । पोर्टफोलियो पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ । यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने नीति निर्मातादेखि सर्बसाधारणसम्मको मन जित्न सफल भएका विकास बैंकहरुको अस्तित्व खतरामा छ भनेर भन्न सकिने अबस्था छैन । त्यसमा पनि युनिभर्सल बैंकिङको अबधारणमा गएपछि हामीलाई झनै सहज हुन्छ ।
मर्जरपछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विभिन्न प्रकारका समस्या देखिएका छन्, मर्जरपछि बनेको गण्डकी विकास बैंकमा कुनै समस्या देखिएका छन् ?
गण्डकी विकास बैंकको मर्जरलाई नेपालमै उदाहरणको रुपमा लिनुपर्छ । हामी २ वटा विकास बैंक र एउटा राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनी मर्ज भएर बनेका हौं । मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर, पोर्टफोलियो, खराब कर्जाको अबस्था जस्ता तथ्यांकहरु धेरै नै राम्रा थिए । मर्जरपछि केही संस्थाहरुमा समस्या आएको सुनिन्छ । केही संस्थाहरुले आफ्ना समस्याहरु आन्तरिक रुपमा हल गर्नुभयो होला, केहीका सार्बजनिक पनि भएका छन् । तर, गण्डकी विकास बैंकमा कुनै प्रकारका समस्या आएनन् । खोलो हिडेको ठाँउमा चिसो हुन्छ भन्छन्, हाम्रो मर्जरमा त्यस्तो चिसो पनि देखिएन । सबै कुरा सकारात्मक मात्रै देखिए । यो कुरा मैले भनेको मात्रै होइन, आजको दिनमा कुनै पनि कुरा लुकाउन खोजेर लुक्दैन, तर गण्डकीको यो राम्रो कुरा सबैले छर्लंग देख्न सक्नुहुन्छ । मर्जरपछिको मेरो सफलता भनेकै कर्मचारी ब्यवस्थापन हो भनेर मैले भन्ने पनि गरेको छु ।
कर्मचारीको सेवा सुविधा, बृत्ति विकास, अबसर जस्ता कुरामा हामीले कुनै विभेद गरेका छैनौं । गर्नु हुदैन पनि । यसैकारण गण्डकी विकास बैंकमा मर्जर पछि समस्या देखिएन । हामी राम्रो बन्न सक्यौं ।
सबैभन्दा कठिन नै कर्मचारी ब्यवस्थामा देखियो भन्ने गरिएको छ ?
गाह्रो होला । कर्मचारी ब्यवस्थापनमा राम्रोसँग काम गरिएन भने सिनर्जी नै आउँदैन । हाम्रो संस्थाको इन्जिन भनेकै कर्मचारी हुन् । कर्मचारीले राम्रोसँग काम गरिदिए न हाम्रो बैंक राम्रो हुने हो । कर्मचारीको सेवा सुविधा, बृत्ति विकास, अबसर जस्ता कुरामा हामीले कुनै विभेद गरेका छैनौं । गर्नु हुदैन पनि । यसैकारण गण्डकी विकास बैंकमा मर्जर पछि समस्या देखिएन । हामी राम्रो बन्न सक्यौं । मर्जरपछि मेनेजरभन्दा माथिल्लो तहको एक जना कर्मचारीले पनि बैंक छोडेको छैन । यो कुरामा हामीले गर्व गर्नुपर्छ ।
गण्डकी विकास बैंकको वित्तीय अबस्था कस्तो छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्येक त्रैमासमा वित्तीय विवरण सार्बजनिक गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रा अधिकांश परिसुचकहरुले विकास बैंकहरुमध्येमा हामी राम्रो बैंक हौं भन्ने देखाउँछन् । पुँजीको आधारमा हेर्नुभयो भने गण्डकी विकास बैंक सबैभन्दा अगाडि हुदैछ । हाम्रो चुक्ता पुँजी २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुग्दैछ । ब्यवस्थानको पार्टमा हेर्नुभयो भने पनि अरुसँग हामी पूर्ण रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेकोले नै हाम्रो ब्यवसाय विस्तार भएको छ ।
हाम्रा अधिकांश परिसुचकहरुले विकास बैंकहरुमध्येमा हामी राम्रो बैंक हौं भन्ने देखाउँछन् । पुँजीको आधारमा हेर्नुभयो भने गण्डकी विकास बैंक सबैभन्दा अगाडि हुदैछ ।
नाफाको अबस्था हेर्न हो भने तेस्रो त्रैमाससम्ममा आउँदा हामी तेस्रो स्थानमा छौं । खराब कर्जाको अबस्था हेर्नुहुन्छ भने कूल कर्जाको १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात ०.८ प्रतिशत छ । आगामी असार मसान्तमा यो परिमाण पनि कम गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । कर्मचारीको क्षमता विकास, बृत्ति विकास र अबसर प्रदान गर्ने कार्यमा हामीले कुनै कन्जुस्याइ गरेका छैनौं । लगानीकर्ताको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने गत असारको चुक्तापुँजी अनुसार हामीले २४.६ प्रतिशत बोनस सेयर दिएका छौं । तर हामीले डेड महिना अगाडि जारी गरेको हकप्रदलाई पनि बोनस दिएको कारण यस्तो बोनस सेयर १९.३१ प्रतिशत बोनस सेयर दिएका छौं ।
हामी सातै प्रदेशमा शाखा संचालन गरेरर वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । अहिले हाम्रा शाखा संख्या ६५ छ । अबको केही महिनाभित्रमा नै शाखा संख्या ७७ भन्दा बढी हुदैछ ।
हामी सातै प्रदेशमा शाखा संचालन गरेरर वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । अहिले हाम्रा शाखा संख्या ६५ छ । अबको केही महिनाभित्रमा नै शाखा संख्या ७७ भन्दा बढी हुदैछ । यसकारण सबै परिसुचकहरुले गण्डकी विकास बैंक अग्रपंतीको विकास बैंक बन्न सफल भएको छ । हामी सेवा प्रवाह र परिसुचकको अबस्थामा अग्रपंतीकै विकास बैंकको रुपमा रहिरहन सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।